တစ်ဦးစတိုးနီးယားကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီနိုင်ငံခြားသားများအခွန်မယ့်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) အဖွဲ့ဝင်ပေးထားပါတယ်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏တခုတည်းသောဝင်ငွေတိုးနီးယား၏အပြင်ဘက်တွင်ရရှိခဲ့သည်ဆိုပါကအဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းများဖြန့်ဝေလက်ခံရရှိနိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်များနှင့်ရှယ်ယာရှင်များဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။ ဤသည်နိုင်ငံခြားသားများမှအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တစ်ခုတည်းသောအီးယူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အက်စ်တိုးနီးယားကိုတရားဝင်စတိုးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံဟုခေါ်ခြင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းဥရောပရဲ့ဘောလ်တစ်ဒေသတွင်း၌တည်ရှိသည်။ အက်စ်တိုးနီးယားကိုအနီးကပ်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ဖင်လန်ဆင်တူပါသည်။ ဒိန်းမတ်နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံက၎င်း၏အစောပိုင်းသမိုင်းအတွက်စတိုးနီးယားကြီးစိုး။ 1920 မှာတော့စတိုးနီးယားလွတ်လပ်သောအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ လွတ်လပ်ရေး 1991 အတွက်ရရှိခဲ့ခဲ့သည်တိုင်အောင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်သည့်အခါသို့သော်ရုရှားဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတိုင်းပြည်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဦးတည်းအိမ်သူအိမ်သားလွှတ်တော်, တစ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူတစ်ဦး "ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပါလီမန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတနိုင်ငံ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ အက်စ်တိုးနီးယား 2004 အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
• စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားရေးပါဝင်လာ: နိုင်ငံခြားသားများတစ် PLC အပေါင်းတို့၌ရှယ်ယာများကိုဖန်တီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အခွန်ကင်းလွတ်: အဆိုပါစတိုးနီးယား၏အပြင်ဘက်တွင်ဝင်ငွေခွန်ရရှိအခွန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်အခြားသူများကိုသူတို့အစိုးရတွေကအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း: တစ်ဦးသက်သေခံရှေ့နေသုံးပြီးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်3ရက်ပေါင်းကြာနိုင်ပါတယ်စဉ်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်နာရီအနည်းငယ်ကြာပါတယ်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: တစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုမြို့တော်ရှယ်ယာအလှူငွေဖို့ကန့်သတ်သည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ / တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်လည်း PLC ၏ပြီးပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။
• အနိမ့်နိမ့်မြို့တော်: နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် 2,500 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
• အီးယူအဖွဲ့ဝင်: အက်စ်တိုးနီးယားဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အပြည့်အဝအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးစတိုးနီးယားကုမ္ပဏီအခြား Estonian အဘိဓါန်ဥပဒေရေးရာ entity အသုံးပြုထားပြီးကုမ္ပဏီအမည်အားမသုံးရပါမည်။
တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၎င်း၏အမည်ကို၏အဆုံးမှာအတိုကောက် "OU" တွေကိုအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ, ပုဂ္ဂလိကကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ, ကန့်သတ်မိတ်ဖက်, ယေဘုယျမိတ်ဖက်များနှင့်စီးပွားဖြစ်အသင်းအဖွဲ့: အဆိုပါကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Code ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ငါးအမျိုးအစားများကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားများနှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံးက "ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ" (Osaühingသို့မဟုတ် OU) ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကန့်အသတ်ကုမ္ပဏီ (PLC) တစ်ဦးချင်းစီ၏ရှယ်ယာ (osad) သို့ကွဲကွာက၎င်း၏ရှယ်ယာမြို့တော် (osakapital) ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာရှင်များကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုရရှိရန်။
ရှယ်ယာရှင်များကုမ္ပဏီ၏ကြွေးမြီများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံထိုက်ပေမရှိကြပေ။ သူတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်ဆီသို့မိမိတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုဖို့ကန့်သတ်သည်။ အဆိုပါ PLC က၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတူ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်, စာချုပ်များနှင့်အကြွေးတွေအားလုံးကို liabilities ယူဆတယ်။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်တိုးနီးယားအတွက်ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားခံရဖို့အားလုံး applications များလက်ခံခဲ့သည်။
•နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ရှင်တွေကသူတို့အပြည့်အဝအမည်များ, မေးလ်လိပ်စာ, နှင့် e-mail လိပ်စာပေးရမညျ။
•တစ်ခုစာရင်းစစ်ကနေတန်ဖိုးတဲ့ professional ထင်မြင်ချက်နှင့်အတူမည်သည့်တူသော-မျိုး (Non-ငွေကြေးဆိုင်ရာ) ပံ့ပိုးမှုများကို၏အသေးစိတ်;
•အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်အစေခံရန်သဘောတူညီခကျြ၏ဒါရိုက်တာ '' အဖွဲ့ဝင် notarized ကြေညာချက်၏ဘုတ်အဖွဲ့;
•မေးလ်လိပ်စာ, အီးမေးလ်လိပ်စာ, တယ်လီဖုန်း, ဖက်စ်, စသည်တို့အပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်သွယ်ပါ,
အောက်ပါအချက်အလက်တွေကိုတစ်ဦး PLC ၏ registry ကိုကတ်များထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်:
•ဒါရိုက်တာများ '' အဖွဲ့ဝင်အမည်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို၏ဘုတ်အဖွဲ့;
ကုမ္ပဏီများနာရီအနည်းငယ်အတွင်းနေရာတစ်နေရာယူနိုငျသောအီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ယင်း PLC3ရက်ပေါင်းအထိကြာနိုင်သည့်တစ်ဦးသက်သေခံရှေ့နေသုံးပြီးမှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အားလုံးမှတ်တမ်းများတင်သွင်း registry ကိုကတ်များနှင့်စီးပွားရေးစာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင်အများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်။
ယင်း၏ရှယ်ယာမြို့တော်အဘို့အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက် 2,500 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတည်းရှယ်ယာများ၏အမည်ခံတန်ဖိုးကိုအဘို့အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက် 1 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
တည်ထောင်သူအားလုံးလျော့နည်း 25,000 ယူရိုထက်ရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်အတူပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းစီရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်အခါမြို့တော်ပံ့ပိုးမှုများကို paid မရကြောင်းကြေညာနိုင်ပါတယ်။ မြို့တော်ပံ့ပိုးမှုများကိုအပြည့်အဝပေးဆောင်နေကြသည်အထိသို့သော်ပိုင်ရှင်များ (တည်ထောင်သူ) အားလုံးကုမ္ပဏီအကြွေးတွေနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံထိုက်ပေရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး PLC ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်
ရှယ်ယာရှင်များမဆိုတိုင်းပြည်အတွင်းနေထိုင် (သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်များမှာ) အဘယ်သူသည်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်သဘာဝကလူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အက်စ်တိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ကြပါဘူး။
တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာတစ်ဦးမည်သည့်တိုင်းပြည်နိုင်ငံသားနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်ဖြစ်နိုင်သူ PLC စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာရှယ်ယာရှင်များဖြစ်ရန်မလိုပါ။
တိုင်း PLC ကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြုပြီးစီမံခန့်ခွဲထားတဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ဘုတ်အဖွဲ့ရှိရမည်။ တစ်ဦးတည်းသာညွှန်ကြားရေးမှူးတည်ရှိနေလျှင်, ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တစ်ဦးတည်းသာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အများစု Estonian အဘိဓါန်နေထိုင်သူများမဟုတ်ကြလျှင်မည်သို့ပင်သည်, PLC သတိပေးချက်များနှင့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်းရှိရာဒေသခံတစ်ဦးအဆက်အသွယ်နှင့်အတူတိုးနီးရနျးကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုပေးရမညျ။
အက်စ်တိုးနီးယားတစ်နယ်မြေကိုအခြေခံပြီးကော်ပိုရိတ်အခွန်စနစ်ကရှိပါတယ်။ တစ်ဦးက 100% ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေဝင်ငွေပေါ်တည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
အမြတ်အစွန်းပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များမှဖြန့်ဝေသည့်အခါမှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်စတိုးနီးယားအတွင်းပိုင်းရရှိခဲ့ပြီးဝင်ငွေသာအခွန်ကောက်နေကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ retention နှင့်အမြတ်အစွန်းများ reinvestment အခွန်ကောက်ကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်နှုန်းကို 20% ဖြစ်ပါတယ်။
အက်စ်တိုးနီးယားအခွန်, အကောက်ခွန်ဘုတ်အဖွဲ့က်ဘ်ဆိုက်၏သမ္မတနိုင်ငံအဆိုအရ "non-နေထိုင်သူသာတိုးနီးရနျးဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်" ။ အခြားတိုင်းပြည်များတွင်တစ်ဦးက Non-နိုင်ငံသားလူနေမှုအချိန်ပြည့် non-နေထိုင်သူစဉ်းစားသည်။
non-နေထိုင်သူမှပေးဆောင် Dividends non-နေထိုင်သူမှ taxable မရှိကြပေ။ ယင်း၏ Estonian အဘိဓါန်ကိုအခြေခံပြီးဝင်ငွေပေါ် Non-နေထိုင်သူများမှခွဲဝေပေးဆောင်ခြင်းသောအခါအသို့သော် Estonian အဘိဓါန်ကုမ္ပဏီတစ်ကော်ပိုရိတ်အခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
အက်စ်တိုးနီးယားမှသာလြှငျ Non-နေထိုင်သူ Estonian အဘိဓါန်ကုမ္ပဏီများသည်အခွန်များ:
1 ။ Estonian အဘိဓါန် Source ဝင်ငွေရှိ၏ သို့မဟုတ်
2 ။ တစ်ဦးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိနေခြင်းဟာအမြဲတမ်းအပေါ် အခြေခံ. စတိုးနီးယား (ဆိုလိုသည်မှာကုမ္ပဏီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်) တွင်တည်ရှိကြောင်း။
အက်စ်တိုးနီးယားအခြားအခွန်စာချုပ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူစတိုးနီးယားကုမ္ပဏီနှင့်ယင်း၏ပိုင်ရှင်အကြားတစ်ဦးကို double အခွန်အခွအေနေရှောင်ရှားရန် 50 အခြားနိုင်ငံများမှကျော်နှင့်အတူအခွန်စာချုပ်များလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစား PLC ရဲ့တစ်ဦးစာရင်းစစ်ခန့်အပ်ရန်မလိုပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့န်ထမ်းအရေအတွက်, ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးနှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှင့် ပတ်သက်. နိမ့်ဆုံးခုံတန်ဖိုးများကိုကြီးထွားခြင်းနှင့်ကျော်ဖြတ်လျှင်, ပညတ္တိကျမ်းတစ်ခုစာရင်းစစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရသည်ဟုလိုအပ်သည်။ ဤအတံခါးခုံတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်ရင်တောင်အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများတစ်ခုစာရင်းစစ်များ၏ချိန်းလိုအပ်လျှင်, တဦးတည်းအဖြစ်ခန့်အပ်ထားရပါမည်။
တစ်ဦးက PLC အီလက်ထရောနစ်တနေ့အတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားများအားလုံးရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နှင့်ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲခြင်း, တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်မရှိ, အခွန်, အနိမ့်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်အီးယူအဖွဲ့ဝင်: an စတိုးနီးယားကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီကဤအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။